यी हुन् चितवनकी एक बिपन्न परिवारकी १५ बर्षिया छोरी अस्मिता, जसले संसारकै महँगो र राम्रो कलेजमा फ्रीमा पढ्ने अवसर पाईन ! – AB Sansar
December 10, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on यी हुन् चितवनकी एक बिपन्न परिवारकी १५ बर्षिया छोरी अस्मिता, जसले संसारकै महँगो र राम्रो कलेजमा फ्रीमा पढ्ने अवसर पाईन !
संसारकै राम्रो र महँगो स्कूलमा पढ्ने रहर कसलाई नहोला र ? धनी परिवारका छोराछोरीले पैसाकै बलमा भएपनि महँगो स्कुल/कलेज ताक्छन् तैपनि सबैले अवसर पाउँदैनन् । त्यसमाथि गरिबका छोराछोरीले त झन् कसरी कल्पना गर्नु ? संसारकै महँगो र उत्कृष्टमध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय कलेजमा नेपालबाट एक विपन्न परिवारकी छोरीले पढ्ने अवसर पाएकी छन् । समता स्कुलमा मासिक सय रुपैयाँ शुल्कमा पढेकी अस्मिताले वार्षिक एक करोड शुल्क लाग्ने कलेजसम्मको यात्रा तय गरेकी छन् । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
पढाइ र प्रतिस्पर्धामा अब्बल भएका कारण अस्मिताले उक्त कलेजमा निःशुल्क पढ्ने अवसर पाइन् । समतामा सय रुपैयाँ शुल्कमा पढेकी उनले वार्षिक एक करोड शुल्क लाग्ने कलेजसम्मको यात्रा तय गरेकी छन् । उक्त कलेजमा नेपालबाट पनि विपन्न विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर पहलकदमी भने गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गरेका थिए ।
महतोले धनीका छोराछोरीले पढ्ने ठाउँमा गरिबका विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर पहल गर्दै आएका थिए । पछिल्लो दुई वर्षयता महतोेले समता स्कुलमा आवतजावत बढाएका थिए । त्यसपछि उनले आफ्नी छोरीले पढेको कलेजका प्रिन्सिपल रिचर्ड म्याकडोनाल्डलाई नेपाल बोलाए । २०१९ मा स्कुलका प्रिन्सिपल रिचर्ड नेपाल आए ।
उनले समताको पढाइ र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको अवस्थामा चासो दिए । त्यसपछि उनले एकजना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भन्दै विद्यार्थीको क्षमता मापन गरे । समतामै पढ्दै गरेका ५ सय विद्यार्थीको विवरण संकलन गरेर स्विट्जरल्यान्ड गएका रिचर्डले अस्मिताको नाम छनोट गरेका हुन् । शिवहरी घिमिरेले नागरिक दैनिकमा यो खबर लेखेका छन् ।
दुखद खबर : विश्वभर म्यासेन्जरमा समस्या देखियो !
उपत्यकाका विद्यालय भोली भदौ १५ गतेबाट सञ्चालनमा आउने